Catégorie : Lesona 6: Lesona hafa avy amin'Ilay Mpampianatra lehibe
Vakio ny Gen. 28:10-17. lnona no tontolon-kevitr'io tantara io? Ary inona no lesona raisintsika mikasika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrampony ho an'ireo izay mandositra ny fahotany?
Latsaka tamin'ireny fanaovana fitaka mampidi-doza ireny i Jakoba, sady nanampy azy ny reniny. Mizaka ny vokany izy izao. Nandrahona azy ho faty ny rahalahiny, koa nandositra izy ary nanitsy ny lalany tao Harana, izay misy ny dadatoany. Nampitebiteby sy nampatahotra ny zava-drehetra.
Nihamaizina ny andro, tratra alina i Jakôba tamin'izay. Teny an-kebakeba-tany no nisy azy izao, ary ny lanitra no tafo. Nahita vato hatao ondana izy ary resin-tory teo. Tsy ela dia nanonofy izy, dia ilay nofy diso fantatsika loatra, ka ilay tohatra hitany dia teo amin'ny tany ny tongony ary nahatratra ny lanitra ny lohany. Anjely no niakatra sy nidina tea amboniny.
Nandre feo izy avy eo nanao hoe: "lzaho no Jehôvah, Andriamanitr'i Abrahama ". Namerina ireo teny fikasana izay efa fantatr'i Jakoba tsara ilay feo. Efa fandreny teo anivon'ny ankohonany mantsy izany. 'Ho marobe ny taranakao'. `Ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izy ireo'. "Indro, Izaho momba anao", hoy ihany ilay feo, "ka hiaro anao amin'izay lalan-kalehanao rehetra, (...) fa tsy handao anao Aho mandra-panaoko izay voalazako taminao" Gen. 28:15.
Nanoratra izao teny izao i Ellen White taty aoriana: "Tazan'ity lehilahy be finoana ity (i Paoly) ilay tohatr'i Jakoba izay nampiseho an'i Kristy nampiray ny tany tamin'ny lanitra, dia Ilay Lehilahy tonga Iafatra ao amin'Andriamanitra tsy hita fetra. Nampahery azy ny fahatsiarovany ny patriarika sy ny mpaminany izay nametraka ny fitokiany teo amin'Ilay afaka hampionona sy hanohana ny finoany; ho Azy koa no nanolorany ny ainy izao." - VM, t. 449.
Nifoha tamin'ny torimasony i Jakoba ka nanao anakampo hoe: "Ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehôvah, fa izaho no tsy nahalala". "Mahatahotra" ny zava-niseho teto. Tsy hohadinoin'i Jakoba mandrakizay izany toerana izany ary nomeny anarana. Nivoady izy avy eo fa ho mahatoky amin'Andriamanitra mandritra ny androm-piainany.
Inona ny lesona azontsika sintonina avy amin'io tantara io momba ny fitadiavan'Andriamanitra antsika, dia Izy ao amin'i Kristy, na dia eo aza ny fahotantsika? Eto indray, nahoana no tokony ho laharam-pahamehana ao anatin'ny fanabeazana kristianina izany fampianarana izany?